Imibhalo nge Sesie Bonsi
U-Sesie ungummeli onekhono eliphezulu nolwazi emikhakheni yobuchwepheshe beselula nengqalasizinda ehlanganisa kodwa engagcini nje ngemithetho yezokuxhumana yomhlaba wonke, amasistimu okukhokha amaselula kanye nemithetho yezezimali, i-m-commerce, nemithethonqubo yezohwebo kwezenhlalo. Umdlali weqembu okhuthele futhi ogqugquzelekile onamakhono aphakeme okuhlaziya ibhizinisi kanye nekhono lokuhlaziya nokuthuthukisa izinqubo zebhizinisi kubuchwepheshe beselula. Iphethe amalungelo obunikazi amabili kubuchwepheshe bokukhokha. I-Visa Technology Partner, kanye nomsunguli we-FIS Fintech Accelerator Cohort 1. Uchwepheshe osebenzayo futhi okhuthele onesizinda esihlukile kwezamabhizinisi, ibhizinisi, umthetho, kanye nesakhiwo senhlangano.
I-Bluetooth Payments Ivula Kanjani Imingcele Emisha
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 3, i-2021 Lwesine, Disemba 2, 2021 Sesie Bonsi
Cishe wonke umuntu uyesaba ukulanda olunye uhlelo lokusebenza njengoba behlala phansi ukuze badle isidlo sakusihlwa endaweni yokudlela. Njengoba i-Covid-19 ihambisa isidingo soku-oda ngaphandle kokuthinta kanye nezinkokhelo, ukukhathala kohlelo lokusebenza kwaba uphawu lwesibili. Ubuchwepheshe be-Bluetooth busethelwe ukwenza lula lokhu kuthengiselana kwezezimali ngokuvumela izinkokhelo ezingathintwa kumabanga amade, kusebenzise izinhlelo zokusebenza ezikhona ukwenza kanjalo. Ucwaningo lwakamuva luchaze ukuthi ubhubhane lwasheshisa kanjani ukwamukelwa kobuchwepheshe bokukhokha bedijithali. 4 kwabangu-10 abathengi base-US banayo